Xisbul Islaam oo isku fidinaya Mudug iyo Puntland oo loo baqay | raascasayrmedia.com
← Faroole oo Nin Reer Bari ah Xil ka Qaadis ku Sameeyay
Isimada ugu waawayn Gobalka Bari ayaa la kulmay Maamulka Gobalka Bari Daawo Sawiro →
May 11, 2010 · 4:47 pm
Xisbul Islaam oo isku fidinaya Mudug iyo Puntland oo loo baqay
Maleeshiyaadka Xisbul Islaam ayaa tartiib tartiib isugu fidinaya deegaanada Gobolka Mudug, kadib markii labo todobaad ka hor la wareegeen Degmada xeebta leh ee Xarar Dheere oo saldhig u aheyd Burcad Badeedka.
Xisbul Islaam ayaa maanta la wareegay Degmadii Labaad oo ka tirsan Mudug, kadib markii Maleeshiyaadkeeda ay si nabdoon ku galeen degmo lagu magacaabo Jowle oo ilaa 50KM u jirta Xarar Dheere.
Qabsashada Xisbul Islaam ayaa ka dambeysay markii deegaankaas barqanimadii maanta ay galeen Ciidamadooda iyo saraakiil la socday, kuwaasoo kulan la qaatay dadka deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in Odayaasha deegaanka iyo Saraakiisha Xisbul Islaam ay isku af garteen in shareecada Islaamka laga hirgeliyo Degmadaas, si shacabka ku nool ay u helaan cadaalad iyo sinaan.
La wareegitaanka Xisbul Islaam ayaa ka dhigan sidii ay isugu fidin lahaayeen deegaanada Mudug oo idil, waxaana haatan soconaya qorsheyaal ballaaran oo Kooxaha Mucaaradka ku doonayaan in ay dhamaad Koofurta Soomaaliya oo dhan u qabsan lahaayeen.
Maamul xaafadeedka Galmudug oo ka taliya qeybo kooban oo K/Galkacyo ah ayaa ku yeeray wiishka, iyadoo Maamulkan haatan bilaabay abaabul iyo isu habar wacasho ku aadan sidii ay uga hortagi lahaayeen daadka ku soo socda.
Tallaabada Xisbul Islaam u qaadeen la wareegitaanka degmadii labaad ee ka tirsan Gobolka Mudug ayaa ku soo beegmeysa, xilli Horjoogaha Maamul xaafadeedka Galmudug Col. Caalin uu ku sugan yahay Magaalada London